Njengoba iTunes yakhelwe ukudlulisa umculo kuma-iPod. Kunzima ukudlulisa umculo kusuka ekhompyutheni yakho iPod. Nokho, ungase bemagange ukukopisha amaculo kanye lwadlalwayo emuva iTunes esimweni wena lost amafayela kukhompyutha yakho, computer izingozi, noma ithengwe ikhompyutha entsha.
Ungasebenzisa iTunes ukukopisha amaculo kanye zokudlala computer yakho, ubone Isifundo Apple olusemthethweni lapha
Ungase wakuthola besebenzisa iTunes ukukopisha izingoma ukuthi isenzo inconvenient.Here sizokubonisa indlela elula ukudlulisa umculo esuka iPod kuya computer besebenzisa uyisidingo iPod Transfer.
Ukudlulisa umculo kusuka iPod kwikhompyutha
Thwebula Wondershare MobileGo for iOS (Amawindi) noma Wondershare MobileGo for iOS (Mac) Okokuqala, futhi silandele izinyathelo:
Step 1: Xhuma iPod yakho nge-PC
Ngemuva efakwe lolu hlelo ukufaka bese uyisebenzise. Yibe xhuma iPod yakho computer. Linda okwesikhashana kuze kohlelo ukubona idivayisi.
Inothi: Kusukela Wondershare MobileGo ye-iOS kufanele abize ingxenye iTunes umsebenzi amamojuli, udinga ukufaka i-iTunes wakamuva kwikhompyutha yakho.
Step 2: Ukudlulisa umculo kusuka iPod kwikhompyutha
Khetha idivaysi yakho ku kwesokunxele lwemibhalo umuthi, bese uchofoze inkinobho "Media", ke uchofoze inkinobho "Music" on the line phezulu. Khetha amaculo ufuna ukukopisha kusuka iPod, chofoza "Exprot ukuba 'on phezulu, uhlu olukumabhekezansi izoba shou up, khetha "Thumela ukuba Computer My". Bese ukhethe indlela ukusindisa izingoma.
Inothi: MobileGo ye-iOS (Amawindi) luhambisana ngokugcwele iPod touch 1-5 isizukulwane, Wabuye iPod shuffle, iPod nano and iPod Classic.
Uma ufuna ukukopisha leli uhlu lwadlalwayo kuwe iPod kuya computer. Chofoza “Uhlu lwadlalwayo” futhi ukhethe uhlu lwadlalwayo zakho abafunwa bese uchofoze “Thekelisa”.
Inothi: I Mac version engafuni ukuthekelisa zokudlala Mac.
Posted on Okthoba 1, 2013 May 9, 2015 Umbhali WillIzigaba EhambayoAmathegi ikhophi songs kwakha iPod kwikhompyutha, download izingoma kusuka iPod kwikhompyutha, iPod umculo sokudlulisa, Ukudlulisa umculo kusuka iPod kwikhompyutha
Langaphambilini post Previous: Indlela ukwenza isipele idatha iPhone ngaphambi ngcono ku-iOS 7
Next post Next: Indlela ukudlulisa izithombe kusuka iPhone kwikhompyutha